मन्त्रिपरिषद्को 'भिडियो बैठक' : 'हाइ-हेल्लो'का लागि यत्रो प्रचार किन ?
काठमाडौं – एक साताअघि उपचारका लागि सिंगापुर गएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत सोमवार भिडियो कन्फरेन्समार्फत मन्त्रिपरिषद बैठकको अध्यक्षता गरेको विषय अहिले विवादित बनेको छ ।
राष्ट्रपतिबाटै कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीका रूपमा नियुक्त भएका उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षता गर्ने कि सिंगापुरबाट प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यक्षता गर्ने भन्ने विवाद सतहमा आएको हो ।
सोमवार भिडियो कन्फरेन्समार्फत बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबारे विशेषगरी दुईवटा विवाद देखिएका छन् ।
पहिलो विवाद भिडियो कन्फरेन्सको सुरक्षाका सन्दर्भमा उठेको छ भने दोस्रो विवाद मन्त्रिपरिषद् बैठकको कानूनी आधारका विषयमा ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सिंगापुरबाट मन्त्रिपरिषद् बैठक सम्पन भएको भन्दै ट्वीट समेत गर्न भ्याए । तर सरकारका प्रवक्ता गोकुल बाँस्कोटाले मन्त्रिपरिषदको बैठक नभई 'हाइ–हेल्लो' मात्र भएको दाबी गरे ।
'क्याबिनेटको बैठक भनेका थिएनौं । मैले बताएको थिएँ कि आज हामीलाई उहाँले हेल्लो भन्नुभयो । हामीले नमस्कार गर्‍यौं, उहाँले फर्काउनुभयो । यो पहिलो प्रयोग थियो । आवश्यक सल्लाह-सुझाव दिनुभो र काम गर्न निर्देशन पनि दिनुभयो । आफ्नो स्वास्थ्य सामान्य रहेको बताउनु भयो । मैले यति नै बताएको थिएँ । यसलाई बेग्लै ढंगले लगियो । सार्वभौमसत्तामाथि नै प्रश्न उठ्यो,' बिहीवार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बाँस्कोटाले भने ।
बास्कोटाले यसलाई सार्वभौमसत्तासँग नजोड्न आग्रह गरे । 'सार्वभौमिकताका विषयमा प्रश्न उठाइएको छ, त्यो उठाउनु पर्ने विषय होइन,' स्पष्टीकरण दिँदै बाँस्कोटाले भने, 'बैठकको कानूनी हैसियत छ । मन्त्रिपरिषद्ले भिडियो कन्फरेन्स गर्न पाउने कुरालाई बैठकबाट नै स्वीकृत गरेको छ । तर त्यहाँ कुनै एजेण्डा थिएन, यो पहिलो अभ्यास र पहिलो प्रयास थियो । हामीले भविष्यलाई हेरेर यस्तो निर्णय गरेका हौं ।'
एउटै मन्त्रिपरिषद्‍मा दुई प्रधानमन्त्री ?
बाँस्कोटालाई प्रश्न गर्दै नेपाली कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुषालले हाइ–हेल्लो मात्र गर्नका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठकको कार्यविधि किन संशोधन गरेको भन्दै प्रश्न गरिन् ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रकाश रसाइली स्नेहीले राष्ट्रपति कार्यालयबाट कार्यबाहक प्रधानमन्त्री तोकेको सूचना संसद्‍मा सुनाइसकिएको स्मरण गर्दै प्रश्न गरे, ‘एउटै क्याबिनेटमा २ जना प्रधानमन्त्री हुन्छन् ?’
नेमकिपाका प्रेम सुवालले कार्यबाहक प्रधानमन्त्री हुँदाहुँदै भिडियो कन्फरेन्सबाट मन्त्रिपरिषद् बैठक राखिएकोमा प्रश्न गरे, ‘भोलि दिल्लीबाट भिडियो कन्फरेन्स हुने सम्भावना कति छ ?’
जवाफमा मन्त्री बाँस्कोटाले रुसी राष्ट्रपतिले हिँड्दाहिँड्दै जहाजबाट मन्त्रिपरिषद्को बैठक गर्ने गरेको स्मरण गर्दै परीक्षणको रूपमा मन्त्रीबीच भिडियो कुरा गरिएको बताए ।
‘मान्छेको मुटुको अप्रेसन गर्नुभन्दा पहिला बाँदरको मुटुको अप्रेसन गरिएको थियो परीक्षणका लागि, मन्त्रिपरिषद्को बैठक पनि त्यस्तै हो,’ मन्त्री बाँस्कोटाले भने, ‘दिल्लीबाट पनि हुनसक्छ, न्यूयोर्कबाट, बेइजिङबाट पनि हुनसक्छ, सिंगापुरबाट पनि हुनसक्छ । हाम्रा प्रधामन्त्रीले अमेरिकी राष्ट्रपतिसँग पनि कुरा गर्न सक्नुहुन्छ ।’
सत्तापक्षकै नेता 'फायर' !
भिडियो कन्फरेन्सबाट भएको मन्त्रिपरिषद्को बैठक विवादित बन्यो । सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावलले सार्वजनिक रूपमा नै बैठकको आलोचना गरेका थिए ।
सुदूरपश्चिम इञ्चार्ज रावलले प्रधानमन्त्रीले विदेशबाट भिडियो कन्फरेन्सबाट मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाउनु सुरक्षा र कानूनका दृष्टिले गलत भएको टिप्पणी गरे ।
बुधवार नेकपाको धनगढीमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै देशमा कुनै किसिमको आपतकालीन स्थिति नभएको भन्दै रावलले यो काम विवादास्पद भएको बताएका थिए । तर सूचना प्रविधि विज्ञका रूपमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा रहेका अस्गर अलीले भने भिडियो कन्फरेन्स सुरक्षित रहेको दाबी गरेका थिए ।
‘टेलिप्रिजेन्समार्फत गरिएको ऐतिहासिक मन्त्रिपरिषद् बैठकमा हामीले हाम्रो र प्रधानमन्त्रीज्यूको बीचमा सम्पर्क स्थापित गर्न भर्चुअल प्राइभेट नेटवर्क (भीपीएन) प्रयोग गरेका छौं,’ उनले फेसबुकमा स्ट्याटस लेख्दै भनेका छन्, ‘ट्रान्सफर भएको सूचना इन्क्रिप्ट र डीक्रिप्ट हुने भएकाले सूचना पूर्णतः सुरक्षित हुन्छ ।’